Vonona ‘handrindra ny fifandraisana’ i Tiorka sy i Armenia efa ho 30 taona aty aoriana · Global Voices teny Malagasy
Nnihahenjana nanomboka ny taona 1993 ny fifandraisana teo amin'ny firenena
Voadika ny 19 Oktobra 2021 3:49 GMT
“Ny sisintany Tiorka” avy amin'i Dumphasizer nomena lisansa CC BY-SA 2.0
Nakaton'i Torkia ny sisintaniny mifanolotra amin'i Armenia tamin'ny taona 1993 nandritra ny adin'i Karabakh voalohany tamin'ny fanehoana firaisankina tamin'i Azerbaijan mpiara-dia aminy hatry ny ela. Efa ho telopolo taona taty aoriana, mikasa ny hanokatra indray izany sisintany izany i Torkia taorian'ny fandresen'i Azerbaijan tamin'ny ady tao Karabakh faharoa tamin'ny taona 2020.
Nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Tiorka Recep Tayyip Erdogan tany Azerbaijan ny volana desambra 2020, nilaza izy fa “Raha misy dingana tsara raisina manoloana izany, dia hosokafantsika ny varavarana nihidy.” Iray volana taty aoriana, nilaza tamin'ny mpanao gazety Tiorka Asli Aydintasbas ny mpanolotsaina ambony an'i Erdogan tsy fantatra anarana fa vonona ny “handamina ny fifandraisana amin'i Armenia” i Ankara.
Tamin'ny volana febroary 2021 ny minisitry ny Raharaham-bahiny Mevlüt Çavuşoğlu nanameloka ny mety ho fikasana fanonganam-panjakana ny praiminisitr'i Armenia, Nikol Pashinyan, izay nilaza fa namoaka fanambarana mitaky ny fametraham-pialany ny Ekipa Ankapobeny.
Tamin'ny 24 aprily 2021, nandritra ny fihaonany tamin'ny Patriarka Armeniana Sahak Maşalyan, nilaza i Erdogan fa “Tonga ny fotoana hilazantsika fa efa tonga amin'ny fahamatorana ny Tiorka sy Armenianina hiara-mandresy ny sakana rehetra.”
“Ny olon-drehetra no handresy” raha misy ny fanorenam-paritra lehibe, hoy ny praiminisitr'i Torkia teo aloha Ahmet Davutoglu tamin'ny The Economist tamin'ny volana Mey 2021.
“Ao anaty fihibohana, mety hanamora ny fampandrosoana ara-toekarena sy hanamaivana ny fahantrana ao amin'ny firenena ny sisintany misokatra sy ny fahavitrihan'ny varotra”, hoy i Hans Gutbrod, mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Fanjakana Illa any Tbilisi, sy David Wood, mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Seton Hall nanoratra momba ny Politika Ivelany tamin'ny volana Jiona 2021. Nanampy hoe, “Ny fanatonan'i Ankara dia mety hamela an'i Yerevan hamaha ny fiankinan-doha tanteraka amin'i Rosia, ka hampiroborobo ny fitoniana lehibe isam-paritra. Ary hanana tombontsoa amin'izany koa i Torkia, indrindra amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny varotra.”
Tamin'ny volana Aogositra, nilaza ny praiminisitr'i Armenia, Nikol Pashinyan fa vonona hanamafy ny fifandraisany amin'i Torkia ny firenena taorian'ny fambara tsara avy any Ankara. Nankatoavin'ny parlemantan'ny firenena ny drafitr'asa mandritra ny dimy taona, izay manambara fa “vonona ny hanao ezaka hampirindra ny fifandraisana amin'i Torkia i Armenia.” Rehefa nankatoavina ny drafitra, dia notsikerain'ny mpanao lalàna mpanohitra izany, araka ny tatitra nataon'ny Civilnet.am.
Hita taratra ihany koa tamin'ny fanokafan'i Armenia ny habakabakany ho an'ny sidina Turkish Airline mankany Baku ny fikasana tsara.
Tamin'ny 29 septambra, nilaza tamin'ny fantsom-pahitalavitra Tiorka iray ny mpitondratenin'ny filoham-pirenena any Torkia İbrahim Kalınm hoe, “Raha ny tokony ho izy, ankasitrahanay ny fifandrindrana amin'i Armenia. Ny antony lehibe nanatsaharanay ny fifandraisanay ara-diplomatika sy nanakatonana ny sisintaninay tamin'ny taona 1992 dia ny fibodoana an'i Karabakh. Satria voavaha ny olana, ka raha ny tena izy – tsy misy intsony sakana amin'ny fifandraisana amin'i Armeni̇a. “
Saika nahita marimaritra iraisana i Tiorka sy i Armenia tamin'ny taona 2008 rehefa nankany Yerevan ny filoham-pirenena Tiorka tamin'izany Abdullah Gul mba hijery ny fiadiana ny Amboara Erantany voalohany nifanandrinan'i Tiorka sy Armenia. Herintaona taty aoriana, nankany amin'ny faritanin'i Torkia Bursa ny filoha Armeniana Serge Sarkisian mba hijery lalao baolina kitra iray hafa teo amin'ny ekipa nasionaly roa tonta. Narahina fanasoniavana arofenitra tany Zurich ny lalao sy ny fitsidihan'i Sarkisian tany Torkia, fifanarahana izay natao handrindrana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Nofaritana tamin'izany fotoana izany ho “diplaomasia amin'ny baolina kitra“, nifarana ny fifampiraharahana taty aoriana rehefa nisintaka i Torkia noho ny tsindry mafy avy amin'i Azerbaijan. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Armenia fa tsy misy lanjany ny arofenitra ary foana tamin'ny taona 2018.
Ankehitriny, kely ny vintana hisian'ny fitsabahan'i Azerbaijan. “Talohan'ny nialan'i Armenia tamin'ity faritra ity, noraisin'i Baku ho toy ny famadihana ny fanokafan'i Tiorka ny sisintany ary nanakiana mafy izany izy. Ankehitriny, taorian'ny fiatoana, tsy noresahana intsony izany olana izany ka tsy hahagaga raha mahita feo malefaka kokoa avy any Azerbaijan noho ny tamin'ny taona 2009, “hoy ny mpanadihady ara-politika monina ao Ankara, Hasan Selim Özertem tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Eurasianet.
Mizarazara ny hevitra any Armenia mikasika ny fomba mety ahatanterahan'ity fifandraisana vaovao ity eo amin'ny firenena roa tonta, araka ny filazan'ilay mpanao gazety Ani Mejlumyan manoratra ao amin'ny Eurasianet:
Mihevitra ny ankamaroan'ny mpandinika sy ny manam-pahefana Armeniana fa tokony hanohy ny fandravonana miaraka amin'i Ankara i Yerevan, izy roa ihany tsy misy an'i Rosia, Azerbaijan, na hafa miditra amin'izany. Mandritra izany, hita fa liana kokoa i Torkia amin'ny fanohizana ny fandrindrana ao anatin'ny rafitra tetikasa “3 + 3” narosony, vondrom-paritra iray mandrafitra ny fanjakana Kaokazy atsimo sy ny mpifanila vodirindrina aminy: Armenia, Azerbaijan ary Georgia, miampy an'i Iran, Rosia, sy Torkia.
Mbola ho hita eo ny anjara asan'i Rosia. Raha niresaka tao amin'ny Forum New Knowledge any Moskoa tamin'ny 3 septambra lasa teo, nilaza ny minisitry ny Raharaham-bahiny Rosiana Sergey Lavrov fa “satria tapitra ny ady tany Nagorno-Karabakh, dia misy ny antony hamahàna ny fizotra ara-politika, fitaterana ary ny fifandraisana ara-toekarena.” Tamin'ny taona 2009, nandrisika ampahibemaso ny “diplomasian'ny baolina kitra” ao amin'ny firenena i Rosia ary nankasitraka ny fanaovan-tsonian'arofenitra tao Zurich.
Na izany aza, misy ihany koa ny olana “refy ara-moraly”, hoy i Hans Gutbrod sy David Wood:
Mba hahatrarana fifandraisana mahomby kokoa sy mifanasoa, tokony hiara-hiasa hamaritra indray ny fandripahana Armeniana ny governemanta Armeniana sy Tiorka—sy ny fijaliana lehibe taorian'ny fianjeran'ny Ampira Ottoman – amin'izay tantara iraisana. Dingana lavabe tsy azo ihodivirana sy mampihetsi-po izany. Ho an'i Armenia, midika fiovana mankany amin'ny diplaomasia izany izay manasa ny fiarahamonina Tiorka hiditra — na amin'ny alalan'ny fampiratiana, na amin'ny dia, na amin'ny fifanakalozana akademika (mpampianatra ambony) sy kolontsaina. Eny tokoa, manana iraisana betsaka kokoa noho izay mampizara azy ireo ny fiarahamonina Armeniana sy Tiorka. Mety hahita mitovy izy ireo amin'ny tantaran'izy ireo.
Ny fomba iray hanatanterahana izany dia amin'ny fifantohana amin'ny fihetsiky ny tsirairay sy ny zavatra niainany fa tsy ny “fanamelohana iraisana”, hoy i Gutbrod sy Wood. Nomarihin'izy ireo fa mbola tsy nolazaina feno ny tantaran'ireo nijoro hiray hina tamin'ny Armeniana, ary angamba izao no fotoana mety hampandrosoana azy ireo, hanarenana ny fifamatorana. Saingy miankina amin'ny fahavononan'ny roa tonta izany. Araka ny drafitr'asa napetraky ny parlemanta Armeniana tamin'ny faran'ny volana Aogositra, hanohy ny fandresen-dahatra “ho an'ireo renivohitra manerantany hanaiky ny Fandripahana Armeniana” ny governemanta Armenia, izay “hanamafy ny rafitra fiantoham-piarovana an'i Armenia.” Mety ho sarotra kokoa izany. Mihevitra i Ruben Melkonyan, manam-pahaizana momba ny fandinihana Tiorka ao amin'ny Oniversitem-panjakana Yerevan fa mety tsy maintsy hajanon'i Armenia ny fanekena ny famonoana olona ankehitriny satria “ao anaty toerana marefo” ny firenena.